» यस्तो बेलामा सबै महिलाले जान्नैपर्ने ८ कुरा
यस्तो बेलामा सबै महिलाले जान्नैपर्ने ८ कुरा
२१ असार २०७६, शनिबार ०६:०९
थुप्रै महिलाहरुमा महिनावारी भएको बेलामा भ्रमहरु हुन सक्छ । यहाँ महिनावारीसँग जोडिएका यस्ता भ्रमहरु दिइएका छन् जसलाई सम्पूर्ण महिलाहरुले जान्नैपर्ने हुन्छ-
१. महिनावारीको समयमा शरीर कमजोर हुने गर्दछ
२. महिनावारी रगत फोहोर हुने गर्दछ
३. व्यायाम गर्नु हुँदैन
४. याैनसँग बच्नुहोस्
५. मासिक धर्मको पिडा
६. चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईं गर्भवती हुनुहुने छैन
७. कपाल नधुनुहोस्
८. यो नखानुहोस्
महिनावारी भएको समयमा केहि पनि खान नछोड्नुहोस् । तपाईंलाई मन लागेको जे पनि खान सक्नुहुन्छ । महिनावारी भएको पाँच दिनका लागि विशेष डाइट चार्ट अनुसार खान आवश्यक छैन । मासिक धर्मको चक्र महिलाको शारिरिक स्वास्थ्यमा निर्भर हुने गर्दछ । २८ दिनको चक्र एक औसत समय मात्र हो ।